အချိန် 12:00 PM
စစချင်းဖတ်ခါစကတော့ ငါလေ နင့်ကိုနုတ်နုတ် စင်းပြီး
“သူ့ရဲ့ချွန်ချွန်ထက်ထက် လက်သည်းလေးတွေကိုဖွက်ရင်း မျက်လုံးလေးမှိတ်သွားတယ်..
နာကျင်ညည်းညူသံ ခပ်တိုးတိုးလေး ကြားနေရတယ်.. သေချာပါပြီ ကျနော့်ကြောင့် သူဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီ.. ”
အဲဒါလည်းဖတ်ရော..ငါဒီ Blog ကနားပြီး နင်သေရင်တောင်ငါ အသုဘလိုက်မပို့တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်မိတယ်....ဒါပေမဲ့....
နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေး ဖတ်အပြီးမှာ ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်ပြင်လိုက်တယ်..
နောင်မှ“တ” မိတဲ့ နင့်“နောင်တ” တွေ မြဲနေမယ်လို့ ငါယုံကြည်နေပါတယ်...
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ သတ္တဝါလေးတွေကို ကြင်နာတတ်တာ၊ သနားတတ်တာ ဖြစ်သင့်တာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္စာန်အနေနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အခုထိ လက်မခံနိုင်တဲ့အထဲမှာ ကြောင်တွေပါနေတုန်းပဲ။
ကြောင်တွေ ကို မရက်စက်ပါနဲ. ဗျာ။ ကျွန်တော် က ကြောင်တွေ ဆို အသေချစ်တာ။ သူတို.တွေ ကအရမ်းကို သိတတ်ပြီး အင်မတန်မ သခင် ကို ချစ်ကျတဲ. တိရစ္ဆာန် ပါ။ အစ်ကို ပို.ဖတ်ပြီး ခံစားရတယ်။ အဟင်. (T_T)
ရှမ်းပြည်က အပြန် ကြောင်လေးအကြောင်းတွေးပြီး
နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေးတွေကိုပိုသဘောကျပါတယ် ခံစားချက်လေးကို ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ထိထိမိမိေ၇းတတ်လို့ပါ
လုပ်ထားကိုရင်ရေ... ကောင်မလေးကိုတော့အဲ လိုလုပ်နဲ နော်...
ကိုရင် ရဲ့ မေတ္တာ ၊ မခင်လေးရဲ့ သံယောဇဉ် တွေနဲ့ အရာအားလုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ ၊၊ ကိုရင် ရေ ကောင်းတယ်ဗျာ ၊၊
ရေးတတ်လိုက်တာဗျာ။ ပထမပိုင်းက ဟာသ ရသပေးပြီး နောက်ဆုံး အပိုဒ်ကျ သနားစရာ ကောင်းလိုက်တာ။ ကျွန်တော်လည်း သူများအိမ်မှာ သွားတော့ ကြောင်က ကိုယ့်ပေါ်ပေါ်မှာ လာမှိန်းနေတာ ကြုံဖူးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်က မုန်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မနေတတ်ဘူးဗျ။ တောင့်တောင့် ကြီး ငြိမ်နေရတာ ခုထိ မှတ်မိတယ်။ အမေဆို အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပြောပြောပြီး ရယ်လိုက်တာဗျာ။
အဲ ကိုယ့်အိမ်မှာသာ မွေးမိရင်တော့ ချစ်မိမယ်ထင်တယ်။ ကြက်ကလေး တစ်ကောင် မွေးတုန်းက ခွေးဆွဲသွားလို့ ငိုလိုက်ရတာဗျာ။ ကိုးတန်းတုန်းက။ ကျွန်တော့် အစ်မတွေဆို သာပြီးဆိုးသေးတယ်။ သူများက စီးပွါးဖြစ် မွေးတဲ့ ဝက်ကိုတောင် သွားချစ်တာလေ။ နေ့ တိုင်း အစာကျွေးတယ်။ ဝက်တွေက သူ အမှိုက်သွားသွန်ပြီဆိုရင် ပျော်မြူးပြီး ယောက်ရက်ခတ်နေတာပဲ။ အဲဒါ သူတို့ ပိုင်ရှင်က နှစ်ကောင်မှာ တစ်ကောင်ကို ရောင်းတော့ ကျန်တဲ့တစ်ကောင်က အဲဒီ့ညမှာ သူတို့သခင် ဆီမှာ မအ်ိပ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရှေ့ မှာ လာအိပ်တယ်ဗျာ။ အဲဒီ့ အရောင်းခံရတဲ့ ကောင်ကလည်း ဆိုက်ကားပေါ်ကနေ အိမ်ဘက်ကိုတောင် လှည့်ကြည့်သွားသေးတယ်။
ကိုရင်နော်သာ ကြောင်မချစ်တာ။ ပေဖူးလွှာဆို မိုင်လိုတောင် ခိုးတိုက်တယ်။ အဟိ။ ဒီလောက်ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ သတ္တ၀ါလေးကို လုပ်ရက်လေခြင်း။
ကြောင်ကို မမုန်းနဲ့ ဗျ ရော့ မွေးစားမလား..
တိရိစ္ဆာန်တွေကို ကြင်နာသနားတတ်လာလို့ချီးယားစ်...
လာဗျာ တခွက် တဖလား
I WANT TO KILL ALL THE CATS ON THIS WORLD!!! WA HAHA!!
let's formaclub for cat haters!! :D
ကြောင်ကို အဲလို စည်းမရှိ ကမ်းမရှိချစ်တာတော့ ကျနော်လည်း သဘော မကျဘူးဗျ ။
ကြောင်ကို ကြောင်စားခွက်မှာကျွေး ရင် ရပြီပေါ့ ။
အဲလို ထမင်း ၀ိုင်းနာ ပွတ်သီ ပွတ်သတ် လုပ်တာတော့ ကောင်းတယ် မထင်မိဘူး ။
ကန် လိုက်တာကတော့ မညှာတာလွန်းရာ ကျနေမယ် ထင်ပ ။
နောင် တရတယ်ဆိုလို့နော် ။ မဟုတ်ရင် တရိစ္ဆာန် ချစ်သူများကို တရားဆွဲဖို့ သွားမြှောက်ပေးမလို့ ။
Romantic အချစ်ခရီး တွေ ထွက်ဘူးလားဗျ သွားတုန်းက ရော ဂလိုဘဲလားဂျ...
ကျွန်တော်လဲ ကြောင်မချစ်တတ်ဘူး အကိုရ ခွေးပဲချစ်တယ် .. ကြောင်က ငယ်ငယ်ကဆို ထမင်းစားရင် ပွတ်သီးပွတ်သပ်နဲ့လာလာ တောင်းတယ် သီးသန့် ချကျွေးလိုက်လဲမရဘူး ။
ငယ်ငယ်ကဆိုတော့ ခွေးလိုဆော့လို့လဲမရ ပြန်ကကုပ်တတ်သေးတယ် ။ ခွေးက ဂုတ်ပေါ်တက်ခွပြီး နားရွက်လိမ်ဆွဲနေရင်တောင် အော်ပဲအော်နေတာ ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူး ။
ထွက်ပြေးတတ်တဲ့ ကောင်ပါ ။
ကြည့်မရပေမယ့် ကန်တော့မကန်ပါဘူး :P